कोरोना कहरबीच प्राइम, प्रभु र हिमालयन बैंकले नेपाल राष्ट्र बैकलाई चुनौती दिँदै उठाए सीमा भन्दा बढि पैसा ः राष्ट्र बैंक बेखबर ? - Aathikbazarnews.com कोरोना कहरबीच प्राइम, प्रभु र हिमालयन बैंकले नेपाल राष्ट्र बैकलाई चुनौती दिँदै उठाए सीमा भन्दा बढि पैसा ः राष्ट्र बैंक बेखबर ? -
कोरोना कहरबीच प्राइम, प्रभु र हिमालयन बैंकले नेपाल राष्ट्र बैकलाई चुनौती दिँदै उठाए सीमा भन्दा बढि पैसा ः राष्ट्र बैंक बेखबर ?
नेपाल अहिले कोरोना भाइरसको महामारीसंग लडिरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन यहि मौका र अवसर पारी नेपालका २७ वटा वाणिज्य बैंक मध्ये ३ वटा बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई चुनौती दिँदै डिपोजिटकर्ताहरुसंग पैसा उठाएका छन् भन्दा पत्याउन गाह्रो होला तर, यो सत्य हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरलाई २०७७ असार मसान्तसम्म कुल निषेपमा तोकिदिएको सीमा मात्रै कल डिपोजिट उठाउन निर्देशन नै दिएको थियो ।
तर, प्रभु ग्रुपको ठूलो लगानी रहेको प्रभु बैंक लिमिटेड, हिमालयन सम्शेर राणा र खेतान ग्रुपको हिमालयन बैंक लिमिटेड र नेपाली समूदायको लगानीमा स्थापित प्राइम कर्मशियल बैंक लिमिटेडले नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन विपरित कल डिपोजिट उठाएको तथ्य फेला परेको छ ।
भनिन्छ बैंकहरुले कल डिपोजिट लिँदा ठूला डिपोजिटकर्ताहरुसंग ब्याजदरमा मोलमलाई (दलाली) गरिन्छ । महंंगो ब्याज बैंहरुले दिएका हुन्छ्न । यसबाट शेयरधनी र प्रमोटरहरुले पाउने लाभाशंमा सिधै असर पुग्ने देखिन्छ । यसैलाई निरुत्साहित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले डिपोजिट सीमा भन्दा बढि नउठाउन निर्देशन नै जारी ग¥यो । तर, ५ वटा वाणिज्य बैंकहले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नै चुनौती दिँदै कल डिपोजिट नियम र निर्देशन विपरित उठाएको देखिन्छ । कहाँ छ नेपाल राष्ट्र बैंक ? किन कारवाही अगाडी बडाउँदैन ? नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलज्यू ? यसको उत्तर हामी जस्ता निरिह शेयरधनलिाई अब तपाईलेनै दिने पो हो कि ?
नेपाल बैंकर्स संघ २७ वाणिज्य बैकहरुका सीइओ साबहरुकै छाता संस्था हो । यसैकै तथ्याङ्क हेर्दा ३ वटा प्रभु बैंक, प्राइम कर्मशियल बैंक, हिमालयन बैंकले नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित सीमा भन्दा अतिनै बढि कल डिपोजिट उठाएको देखिन्छ ।
भनिन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकले कुल डिपोजिटको हिस्सा १० प्रतिशत मात्र कायम रहने गरि २७ वाणिज्य बैंकह्रुलाई कल डिपोजिट उठाउन भनेको देखिन्छ । तर, गत भाद्र मसान्तको ३ बैंकको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने प्राइम, प्रमु, हिमालयन बैंकले कुल डिपोजिटको १० प्रतिशत हिस्सा भन्दा बढि कल डिपोजिट उठाएर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नै चुनौती दिएको देखिन्छ । अर्थमन्त्रीज्यू यो कस्तो बैंकिङ्ग हो ?
नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्याङ्क अनुसार भदौ मसान्तसम्म प्राइम कर्मशियल बैंकले १ खर्ब २५ अर्ब ६२ करोड रुपैया कल डिपोजिटबाट उठाएको भेटिएको छ । यो कल डिपोजिटको करिब १६ प्रतिशत हो । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले मात्रै १० प्रतिशत उठाउन सीमा नै तोकेको देखिन्छ । प्राइम बैंकले करिब २० अर्ब पैसा कल डिपोजिटबाटै उठाएको देखिन्छ ।
अर्को प्रभु ग्रुपको लगानी भएको प्रभु बैंक लिमिटेडले भाद्र मसान्तसम्म १ खर्ब ३४ अर्ब ९९ करोड कुल निक्षेपको पैसा उठाएको छ । त्यसका १८ अर्ब १५ करोड पैसा कल डिपोजिटबाट उठाएको भेटिएको छ । यो १४ प्रतिशत हाराहारी हो भन्दा फरक पर्दैन गर्भनर साब के यी दुई बैंकलाई तपाईले नेतृत्व गरेको नेपाल राष्ट्र बैकले जरिवाना र चेतावनीको कारवाही गर्दैन । यसको उत्तर हामी खोजी रहेने छौं । हेक्का होस्
अर्को हिमालयन सम्शेर राणा र खेतान ग्रुपको लगानीको बैंक हिमालयन बैंक लिमिटेडले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई चुनौती दिँदै १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैया कुल निक्षेप उठाएको देखिन्छ । यस मध्ये १३ अर्ब ८२ करोड पैसा कल डिपोजिटबाटै जम्मा गरेको तथ्याङ्क फेला परेको छ । यो कुल डिपोजिटको ११ प्रतिशत भन्न सकिन्छ । गर्भनर साब यी ४ वटा चर्चित बैंकलाई कसले र कहिले जरिवाना र चेतावनी कारवाही गर्ने हो । यसको उत्तर अर्थमन्त्रीले दिने हो कि तपाईले हो ?
नेपाल राष्ट्र बैंक भनेको बैंक र वित्तिय संस्थाको पिता (बुबा) हो । हामीले बुझेको यहि हो । तर, बुबाले भनेको छोरोले कति मान्ने कति नमान्ने कुरा आ–आफ्ना होलान् । यसो भन्दैमा एउटालाई कारवाही अर्कोलाई छुट दिन मिल्दैन ।
यी चार बैंक जसले विगत लामो समयदेखि कल डिपोजिट सीमा विपरितमा पैसा उठाउँदै आएको तथ्य फेला परेको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंक किन बोल्दैन । हामी यसको उत्तर खोजी रहने छौं ।
कलडिपोजिट भन्नाले के बुझिन्छ । त्यो पनि हेरौं । केही समयका लागि उठाउने पैसालाई कल डिपोजिट भनिन्छ । ठूलो समूह, घर घरानाहरुले बैंकहरुको आग्रहमा कल डिपोजिटका खाता खोलिन्छन् र तत्कालका लागि ठूलो डिपोजिट जम्मा गरिन्छ । ती डिपोजिटकर्ताहरुले ब्याज दरको मोलमोलाई गरि ठूलो ब्याज लिने गरिन्छ । यो बैंकिङ्ग नम्स भित्रको खराब परम्परा मानिन्छ ।
राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले टेलिफोनमा पंक्तिकारसंग भने एउटा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने कल डिपोजिटरहरुलाई बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले बढि महत्व दिनुका साथै बढि ब्याज समेत दिएको भेटिएको छ । यो गलत र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित हो ।
निरिह र सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताहरुलाई कल डिपोजिटका ठूला घरघराना र समूहका डिपोजिटकर्ताका कारण ठूलो मारमा पर्ने गरेको देखिन्छ । यो बैंकिङ्ग क्षेत्रको गलत र घिन लाग्दो कार्य हो भन्दा फरक पर्दैन । सचेत भया ।
हिमालयन बैंकको खुद नाफा २ अर्बभन्दा बढी
माछापुच्छ्रे बैंक अब मास्टर कार्ड सञ्जालमा आबद्ध
राष्ट्रपतिले इच्छुकलाई टीका प्रदान गर्ने
सानिमा बैंकद्धारा रुपन्देहीको भलवारीमा नयाँ शाखा विस्तार
बैंकका कर्मचारीलाई अब प्रहरीले नरोक्ने
इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पाँडे कोरोना संक्रमित, ‘स्वास्थ्य ठिक छ’